Boqor Buurmadow oo kaga dhawaaqay Carmo in ay kala hadleen M/weynayaasha Puntland & S/LAND in la kala qaado ciidamada Tukaraq – Puntlandtimes
Boqor Buurmadow oo kaga dhawaaqay Carmo in ay kala hadleen M/weynayaasha Puntland & S/LAND in la kala qaado ciidamada Tukaraq
CARMO(P-TIMES) – Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-madow oo kamid ah Isimadda ugu caansan ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay in ay kala hadleen labada Madaxweyne ee Puntland & Somaliland sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada kusugan deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, oo ay xooga saarayaan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa.
Boqorka oo ka hadlayey munaasabada Caleema-Saarka Beeldaajaha Beelaha Cali Saleebaan oo ka socda magaalada Carmo, ayaa sheegay in ay xooga saarayaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaha colaadeed ee kaloosan labada dhinac.
Buurmadow oo si wanaagsan saameyn ugu leh siyaasadda Madaxtooyada Xisbiga Kulmiye, ayaa sheegay in ay arrintaas kala hadleen Madaxweynaha Puntland oo ay ka sugayaan in la weeleeyo nabadda iyo daganaanshaha.
Mid kamid ah ka qeybgalayaasha munaasabadda ayaa si adag ugu jawaabay Boqor Buurmadow oo uu sheegay in ay ciidamadoodu kala baxaan deegaanada gobalka Sool, taas oo keentay buuq meesha oo dhan ka dhashay, balse Buurmadow oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in labada Madaxweyne-ba ay ka sugayaan in laga shaqeeyo in aan dhiig daadan.
Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-madow ayaa sheegay in Xukuumadda Somaliland ay ka doonayaan in ay ka dhabeyso nabad iyo daganaansho, sidaas oo kalena ay ka sugayaan dhinaca Puntland si lamid ah arrintaas.
Warka Buurmadow oo saameyn ku leh go’aamada Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, wuxuu ka dhigan yahay in aysan Somaliland hadda u muuqdan kuwa doonaya in ay ciidamadooda la baxaan, waxaana muuqata in arrimuhu ay aad iskugu bedelayaan.
MADAX DHAQAMEEDKU HAKU EKAADAAN ARRIMAHA DHAQANKA SIYAASADDU ARRIN UTAALLA MAAHEE.SOMALILAND KAMA BAXAYSO DHULKEEDA EE XOOG CIDDII HAYSAA HAYS KEENTO.OO HADDAY ODAYGA KU CASUUMEEN SHIRKAN DHAQAN MAXAY U XUSHMAYN WAAYEEN ILLEEN MARTIDA WAA LA XUSHMEEYAAYEE MIYAANAY GOB AHAYN LKN ISAGAA QAR JAFAYA MARKUU MARKUU NAQASKA KASII DAAYAY EE NABAD UGU BAAQAY OO MA WAXAAD MOODEEN NABADDA AAD ISKA DIIDAYSAAN INAY ANNAGA UUN WAX NOO TARAYSO.BAL QARXA OO WAXAD DOONTAAN SAMEEYA SE MARKAY LEEYIHIIN LA BAXA CIIDANKIINNA MIYAY RIYOONAYAAN OO MA DHUL MJ BAANU JOOGNAA KKKK DABATO YAA MARTIYI JIRAY.
Muxuu isaga bixi waayay shirka lagusii diyaariyay inangumeed ka daba qayliya xagee lagu arkay marti inta la casuumo loo diyaariyo cid Ku qaylisa.martida waa la xushmeeyaa xataa hadday waxay doonaan Ku hadlaan lkn martidu iyaguba wax xun kuma hadlaan waanay garanayaan wixii meesha kaga habboon bal muxuu sameeyay aan ka ahayn nabad uu ugu baaqay Somaliland iyo puntland.
Muniiro, Boqor baaro madoow runtaa loo sheegay
Neefow noocaaga uma jawaabo meesha ku dhex dawakhay ee boqolka magac sita siduu waalan yahay aamus neefyohow. Ma inay Ku baroorteen si uu ugu baryo muuse biixi baa run loo sheegay ah kkkkkkkk nadal waaxid aamus adigu daaqadda hannagasoo gelinee kkkkk. wuxu muxuu ahaa aar hanna wasakhayn kuddaafadyahay.
Boqorka waajib bay kutahay inuu nabad ka hadlo lkn arinta ciidamada shaqadiisa maaha ciidamo ciidoodii jooga xagee loo raraa waajib qaran bay ha yaan waxaan umalaynayaa in meel dheer looga yeedhayo buti land